१ 1993 1921 until सम्म स्विजरल्याण्डमा सबै किसिमका जुवा अवैध थिए जुन १ 90 २१ मा लागू भएको प्रतिबन्धपछि लागू भयो। XNUMX ० को दशकको शुरुमा यस प्रतिबन्धको उदय केही समयमै भएको थियो किनभने पहिलो अनलाइन जुवा साइट सुरू हुने तयारीमा रहेको थियो। जबकि अनलाइन जुवा अवैध मानिन्छ, कुनै कानून यसलाई लागू गर्दैन र स्विस खेलाडीहरु सुरक्षित अपतटीय क्यासिनोको एक सरणी मा जुवा खेल्न सक्छन्।
स्विजरल्याण्डमा उत्तम अनलाइन क्यासिनोहरू हेर्न तल हाम्रो शीर्ष सूचीमा हेर्नुहोस्, जुन अनलाइन क्यासिनो समीक्षा, प्रस्तावहरू र अधिकको लिंकको साथ यस देशका सबै खेलाडीहरूलाई उपलब्ध सबै शीर्ष अनलाइन क्यासिनोहरू समावेश गर्दछ। स्विजरल्याण्डमा अनलाइन र अफलाइन जुवा कानूनहरूको बारेमा अधिक जान्नको लागि, यस पृष्ठको अन्तमा पढिरहनुहोस्।
स्विजरल्याण्डमा अनलाइन क्यासिनो
त्यहाँ स्विजरल्याण्डमा अनलाइन क्यासिनोहरू छन्, र स्विस प्लेयरहरूले यिनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा खेल्न सक्छन्। तर तपाई उत्साहित हुनु भन्दा पहिले त्यहाँ केहि चीज तपाईलाई थाहा पाउनु पर्छ यस देशका स्थानीय कानूनहरु बारे।
शीर्ष १० स्विस अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
१००% सम्म Welcome Welcome०० स्वागतम बोनस
कुल बोनस $ 500
€ 300 + 150 निःशुल्क Spins
$ 1000 स्वागतम बोनस + २०० फ्रि स्पिनहरू!
€ 600 क्यासिनो बोनस प्याकमा स्वागत छ
Cashback 20% + स्वचालित कैशआउट्स!
कुल बोनस ∞
शीर्ष १० स्वीस अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
स्विस अनलाइन जुवा कानून
करीव years० बर्षदेखि स्विट्जरल्याण्डमा सबै प्रकारका जुवा, लटरी समेत अवैध थिए। सन् १ 70 1993 in मा नयाँ कानून लागू भए पछि यो परिवर्तन भयो, र तुरून्त त्यहाँ थुप्रै ठूला जुवा खेलहरू, क्यासिनोहरू र देशभरि घुम्ने ठाउँहरू थिए।
केही छोटो वर्षभित्र स्विट्जरल्याण्डले जूवा खेल्ने अभाव भएको देशबाट गएको थियो, जहाँ करिब २०% वयस्कहरू नियमित आधारमा जुवा खेल्छन्। यो एक अत्यन्तै सकारात्मक बदलाव थियो, र एउटा जसले देशमा मनोरञ्जनको अनुहार बदल्न मद्दत गर्‍यो र सरकारलाई कर डलरको एक इन्जेक्शन पनि दियो।
प्राविधिक रूपमा, राष्ट्रिय चिठ्ठीहरू अझै पनि यस समयमा गैरकानुनी नै थिए, तथापि स्विस प्लेयरहरूले वास्तवमा चिठ्ठामा लगेका थिए र ती दुवै देश भित्र र बाहिर खेलिरहेका थिए। तर सबैभन्दा ठूलो अलमल अझै बाँकी थियो, किनकि अनलाइन जुवा व्यापक रूपमा फैलिने बित्तिकै स्विट्जरल्याण्डको सरकारले केही पनी समस्या खडा गरे।
एकातिर, तिनीहरू नागरिकहरू अनलाइन जुवा खेल्न चाहँदैनन्, तर अर्कोतर्फ उनीहरूले उनीहरूलाई रोक्न सकेन किनकि उनीहरूले विदेशी वेबसाइटहरू प्रयोग गरिरहेका थिए। उनीहरूले यद्यपि उनीहरूलाई रोक्न यथाशक्य प्रयास गरे तर तर केही अपवादका लागि स्विजरल्याण्डका व्यक्तिहरू अनलाइन जुवा खेल्न सक्षम भएनन्।
यो २०१ 2018 मा परिवर्तन भयो जब सरकारले त्यस कानूनमा मतदान गर्‍यो जुन देशमा अनलाइन जुवा खेलौनालाई अनुमति दिने थियो, तर केवल स्विस खेलाडीहरू र स्विसहरूले अनलाइन क्यासिनोहरू सञ्चालन गरेका थिए। यसको मतलब यो हो कि अनलाइन जुवा सम्भव छ, तर केवल क्यासिनोबाट जसले १००% स्विस स्लाइडर्समा केन्द्रित गर्नेछ र बिग रेटिंग क्यासिनोबाट होइन जुन तपाईंलाई थाहा छ र माया गर्नुहुन्छ।
स्विजरल्याण्डमा अनलाइन जुवा: कानूनी परिदृश्य
CH झण्डा प्रतिमा ऐतिहासिक रूपमा, स्विट्जरल्याण्डले जुवाप्रतिको प्रति ध्रुवीकरणवादी मनोवृत्ति देखायो। १ 1993 1998 until सम्ममा देशमा सबै प्रकारका जुवा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यद्यपि क्यासिनोमा संवैधानिक प्रतिबन्ध खारेज गर्ने बिल पारित भयो र जुवा कानून कानुनी भयो। यस्तो धनी राष्ट्रको साथ, जुवाको स्वतन्त्रता र विकास भयो र १ XNUMX XNUMX। को फेडरल ऐट अफ गेम्स अफ चान्स सम्म यसको क्यासिनो आयो र फेरि स्विजरल्याण्डको इलाकामा भएका सबै खेलहरूमा प्रतिबन्ध लगायो।
यद्यपि यस किसिमको कानूनको समय अझ खराब हुन सक्दैन किनकि अनलाइन क्यासिनोहरूको बूम अघि केहि बर्ष अघि नै भयो। त्यसो भए, अनलाइन जुवा वेबसाइटहरू सम्बोधन गर्न कुनै खास कानूनहरू नभएको र स्थानीय वा भूमिमा आधारित विकल्पहरूको अपुग प्रस्तावको साथ, स्विस क्यासिनो अफिसियान्डोसले अन्तर्राष्ट्रिय साइटहरूको सेवाहरूको मजा लिन द्रुत तुल्याए।
पछिल्ला दुई दशकहरूमा, अनलाइन क्यासिनो सुइस दृश्य यति बढ्यो कि देश छोड्ने सबै कोषहरूले स्थानीय अधिकारीहरूबाट धेरै ध्यान आकर्षित गर्न थाल्यो। यो लामो समय सम्म थिएन, मुख्य चिन्ताको रूपमा खेलाडीहरूको सुरक्षाको प्रयोग गर्दै, सरकारले देशमा अनलाइन क्यासिनोहरूको लागि नयाँ कानूनहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्न शुरू गर्‍यो।
पैसा गेमिंग ऐन र यसले कसरी बजार परिवर्तन गर्‍यो
जुवा ऐन आइकनइन २०१ 2018 मा, मनी गेमिंग ऐनको परिचय छलफल गर्न राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह आयोजित गरिएको थियो। Iss०% भन्दा बढी स्विस नागरिकहरूले सकारात्मक भोट दिए र १ जनवरी २०१ of सम्म स्विस फेडरल गेमि Board बोर्ड (ईडजेनेस्सिचे स्पीलबन्केन्कोमिशन) अनलाइन क्यासिनो परिदृश्यलाई नियमन गर्ने सटीक उद्देश्यको साथ स्थापित गरिएको थियो। स्वेइजर अनलाइन क्यासिनो दृश्य हराएको नयाँ कानूनको परिणाम स्वरूप यसको प्रमुख नामहरू। यस नयाँ विधानले स्विट्जरल्याण्डमा सञ्चालन गर्नको लागि इजाजत पत्रको लागि आवेदन दिन अनलाइन क्यासिनोहरूको रूपरेखा सिर्जना गर्‍यो।
साथै, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्यासिनो एक मान्य इजाजतपत्र बिना देश मा खेलाडीहरु लाई अनलाइन सेवाहरु प्रदान एक कालोसूचीमा जोडीन्छ र DNS ब्लकहरु द्वारा लक्षित। हुनसक्छ नयाँ जुवा ऐनको सबैभन्दा प्रतिबन्धित हिस्सा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन क्यासिनोहरूलाई लाइसेन्सको लागि आवेदन दिन सक्षम हुनको लागि त्यस देशमा शारीरिक उपस्थिति हुन बाध्य पार्छ। यसको मतलव यो हो कि त्यस क्षेत्रका अनलाइन क्यासिनो खेलहरू उपलब्ध गराउन चाहने सबै ठूला नामहरूले स्थानीय भूमिमा आधारित क्यासिनोसँग साझेदारी बनाउनुपर्‍यो - के भइरहेको छ संयुक्त राज्य अमेरिका.
नतिजा स्वरूप, स्वीस खेलाडीहरु लाई मात्र उपलब्ध "प्राविधिक कानूनी" अनलाइन क्यासिनोहरु क्यासिनो Baden, क्यासिनो Lucerne, क्यासिनो Pfäffikon, र क्यासिनो डेभोस र आफ्नो वेबसाइटहरु छन्, जो खेलाडीहरु मजा लिन सक्छन् यदि तिनीहरू १ 18 बर्ष भन्दा माथिको हो। यसबाहेक, CHF १,००० भन्दा कम जीतलाई कर लगाइदैन, जबकि त्यस रकममा% 1,000% कर लागू हुन्छ, जुन धनी देशको लागि पनि एकदम ठाडो हो।
के स्विस खेलाडीहरू अफशोर साइटहरूमा खेल्नको लागि जरिवाना लिईन्छन्?
यस्तो उच्च कर स्तरको साथ, यो आश्चर्यजनक छैन कि धेरै स्विस खेलाडीहरूले अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय साइटहरूमा क्यासिनो खेलहरूको मजा लिन रुचाउँछन् जुन उनीहरूले अझै स्वीकार गर्छन्। यसबाहेक, अफशोर वेबसाइटहरूको मजा लिने खेलाडीहरूको लागि कुनै जरिवाना वा कुनै खास दण्डात्मक उपायहरू छैनन्। जबसम्म तपाईं स्विजरल्याण्डमा अनलाइन क्यासिनोमा पहुँच गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चिन्ताको विषय छैन। साथै, यी केही ब्रांडहरूमा बोनसहरू विशाल छन्।
कसरी स्विट्जरल्याण्ड मा तपाइँको अनलाइन क्यासिनो यात्रा मा शुरू गर्न
अनलाइन क्यासिनो स्विजरल्याण्ड। यस वर्षको रूपमा स्विजरल्याण्डमा अनलाइन जुवाको दुनियामा ठूलो परिवर्तन भएको थियो। कानूनहरूको एक श्रृंखला पारित गरियो र यी कानूनहरूले केवल स्विस लाइसेन्स अन्तर्गत क्यासिनोहरूलाई स्विट्जरल्याण्डमा सञ्चालन जारी राख्न अनुमति दिन्छ।
यो विशेष रूप मा खेलाडी को पक्ष मा धेरै upheaval को कारण हुन गइरहेको छ। हामीलाई थाहा छ कि निकट भविष्यमा, खेलाडीहरूले अझ बढी र अझ राम्रो अनलाइन क्यासिनोहरू खेल्न पाउनेछन्। साथै, तिनीहरू अझै तिनीहरूका मनपर्दो क्यासिनोहरूमा खेल्न सक्दछन् यी कानूनहरूलाई बाइपास गरेर क्रिप्टो मुद्रा र VPNs प्रयोग गरेर।
यहाँसम्म कि VPN को प्रयोग गरी तपाईंको देश मास्क गर्न वा परिवर्तन गर्नको लागि र क्रिप्टोकुरेन्सीको प्रयोगको साथ, एक अनलाईन क्यासिनो खेल्नु मूलतः यूरोपको बाँकी भागहरूमा जस्तै नै छ। जतिसुकै कानूनहरू संशोधन भए पनि, क्यासिनोहरूको मोडिस अपरेन्डी र उनीहरूको आधारभूत जानकारी यी संशोधनहरू अन्तर्गत जान सक्दैन। त्यसोभए आफैलाई यो कानूनको बारेमा चिन्ता नलिनुहोस् किनकि साइन अप गर्नु सँधै समान हुनु पर्छ।
शीर्ष १० स्विस अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 4, 2020 लेखक: Damon
1 स्विजरल्याण्डमा अनलाइन क्यासिनो
2 शीर्ष १० स्विस अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
2.0.1 शीर्ष १० लक्जमबर्ग अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.2 शीर्ष १० रूसी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.3 शीर्ष १० स्लोभाक अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.4 शीर्ष १० कुवेत अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.5 शीर्ष १० फ्रान्सेली अनलाईन क्यासिनो साइटहरू
2.0.6 शीर्ष १० इटालियन अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.7 शीर्ष १० थाई अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.8 शीर्ष १० स्लोभेनियाई अनलाईन क्यासिनो साइटहरू
2.0.9 शीर्ष १० जापानी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.10 शीर्ष १० इजरायली अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.11 शीर्ष १० आइसल्याण्ड अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.12 शीर्ष १० बल्गेरियन अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.13 शीर्ष १० बेल्जियम अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.14 शीर्ष १० पोलिस अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.15 शीर्ष १० ह Hongक Kong अनलाईन क्यासिनो साइटहरू
2.0.16 शीर्ष १० बेलारूसी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.17 शीर्ष १० गुरन्से अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.18 शीर्ष १० निकारागुआन अनलाईन क्यासिनो साइटहरू
2.0.19 शीर्ष १० डोमिनिकन अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.20 शीर्ष १० जिब्राल्टर अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.21 शीर्ष १० पनमानियन अनलाईन क्यासिनो साइटहरू
2.0.22 शीर्ष १० लिचेन्सटेन अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.23 शीर्ष १० स्विस अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.24 शीर्ष १० मौरिस अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.25 शीर्ष १० जर्सी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.26 शीर्ष १० अर्मेनियाली अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.27 शीर्ष १० जर्जियाली अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.28 शीर्ष १० रोमानियाई अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.29 शीर्ष १० केप भर्डे अनलाईन क्यासिनो साइटहरू
2.0.30 शीर्ष १० जमैकन अनलाईन क्यासिनो साइटहरू
2.0.31 शीर्ष १० एन्टिगा र बार्बुडा अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.32 शीर्ष १० बेल्जियन अनलाईन क्यासिनो साइटहरू
2.0.33 शीर्ष १० कोलम्बियाई अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.34 शीर्ष १० सेशेल्स अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.35 शीर्ष १० तान्जानिया अनलाईन क्यासिनो साइटहरू
2.0.36 शीर्ष १० सोलोमन टापुहरू अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.37 शीर्ष १० कुक टापुहरू अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.38 शीर्ष १० पापुआ न्यू गुयना अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.39 शीर्ष १० भानुआटु अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.40 शीर्ष १० मेक्सिकन अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.41 शीर्ष १० मोन्टेनेग्रीन अनलाईन क्यासिनो साइटहरू
2.0.42 शीर्ष १० आइल अफ म्यान अनलाईन क्यासिनो साइटहरू
2.0.43 शीर्ष १० ईस्टोनिया अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.44 शीर्ष १० क्रोएसियाली अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.45 शीर्ष १० ग्रीक अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.46 शीर्ष १० स्विडेनी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.47 शीर्ष १० चेक अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.48 शीर्ष १० हंगेरी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.49 शीर्ष १० लातवियन अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.50 शीर्ष १० डेनिश अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.51 शीर्ष १० पोर्तुगाली अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.52 शीर्ष १० पाकिस्तानी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.53 शीर्ष १० घाना अनलाईन क्यासिनो साइटहरू
2.0.54 शीर्ष १० युगान्डान अनलाईन क्यासिनो साइटहरू
2.0.55 शीर्ष १० केन्यान अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.56 शीर्ष १० नाइजेरियाको अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.57 शीर्ष १० श्रीलंकाई अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.58 शीर्ष १० जाम्बियाली अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.59 शीर्ष १० फिलीपीन अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.60 शीर्ष १० मलेशियन अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.61 शीर्ष १० माल्टिस अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.62 शीर्ष १० स्पेनिश अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.63 शीर्ष १० दक्षिण अफ्रिकी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.64 शीर्ष १० भारतीय अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.65 शीर्ष १० युएई अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.66 शीर्ष १० आयरल्याण्ड अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.67 शीर्ष १० फिनल्यान्ड अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.68 शीर्ष १० नर्वे अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.69 शीर्ष १० न्यूजील्याण्ड अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.70 शीर्ष १० क्यानेडाली अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.71 शीर्ष १० अष्ट्रेलियाली अनलाईन क्यासिनो साइटहरू
2.0.72 शीर्ष १० युके अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.73 शीर्ष १० डच अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.74 शीर्ष १० अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.75 शीर्ष १० अस्ट्रिया अनलाईन क्यासिनो साइटहरू
2.0.76 शीर्ष १० जर्मन अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.77 शीर्ष १० अमेरिकी अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.0.78 शीर्ष १० यूरोपियन अनलाइन क्यासिनो साइटहरू
2.1 शीर्ष १० स्वीस अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
3 स्विस अनलाइन जुवा कानून
4 स्विजरल्याण्डमा अनलाइन जुवा: कानूनी परिदृश्य
5 पैसा गेमिंग ऐन र यसले कसरी बजार परिवर्तन गर्‍यो
6 के स्विस खेलाडीहरू अफशोर साइटहरूमा खेल्नको लागि जरिवाना लिईन्छन्?
ड्र्याक क्यासिनो समीक्षा
शीर्ष १० स्विस अनलाइन ...